-Ukuphila ngokuPhazamiseka kwexhala- Vondt.net
04 / 01 / 2020 /i rheumatism/av ubuhlungu
Ukugula okungapheliyo kunye nokugula okungabonakaliyo
Inqaku leendwendwe ngu UYvonne Barbala.
Njengomntu onesifo esinganyangekiyo, ndizibonele ngokwam indlela yokujongana notshintsho olothusayo ukusuka kwimpilo ukuya "ekuguleni ngokungabonakaliyo". Ukuqala kwam kolu hambo lokugula, ndaye ndafumana ulwandle lolwazi kunye namanqaku ezonyango, kodwa ndinamava amancinci malunga nemeko eyiyo. Njengomama ongatshatanga, bendinoxanduva olupheleleyo nolupheleleyo kubomi bemihla ngemihla lokuhamba ngesantya esiqhelekileyo, kwaye inkululeko yokuwa nesiqhwithi ngokucacileyo yayingeyiyo isisombululo. Ndidinga ukuqonda kunye "nencwadi yokuqukumbela" yento endinokuyenza nayo emhlabeni, kunye nendlela okanye endikugcinileyo.
Amagama amakhulu kunye ne-Medical Jargon
Uninzi lwamagama amakhulu kunye nezihloko kufuneka zichaze indlela endifanele ukuba namava ngayo kunye nokusingatha oku kubomi bam bemihla ngemihla. Njengomntu ongazange weva ngesiqu esi nesiqu kwangaphambi kokuba kufunyaniswe isifo, kwakudala kwaye kungafuneki umntu aphendule. Ndilahlekile yile ncwadi incinci echaza ngokulula nangoku ngqo malunga nendlela yokufumana impembelelo ngokwakho.
Ndiqalise ukubhala imibongo malunga neemvakalelo ezazijikeleze, ngokunjalo neengcinga zabucala eziphawulweyo malunga nesihloko. Andinguye umntu oqeqeshekileyo ngokufunda, ngoko incwadi ayithethi ngaloo nto. Imalunga namava am abucala okuhlala neeBekhterevs. Incwadi yaqala ngomnqweno wokunceda abanye ababekwimeko yam, njengoko ndandizabalaza, njengabanye abaninzi, ukuchaza ngokulula ukuba kunokwenzeka njani ukuba umntu aphile ngokugula okungabonakaliyo.
Incwadi elula kuLwazi oluDibeneyo
Ndifuna ukwenza incwadi encinci enokwenza lula umbono wokuba kwenzeka njani na kumntu ozimeleyo, kodwa ukuze umntu akwazi ukuchaza ngokulula izithandwa zakhe. Masibeke ukugxila kude kumagama anzima kunye nezihloko, kunye nokwakha ingcinga yokuba yeyakho kunye nokuqonda okuqhelekileyo kumlo wokulwa nesi sifo. Incwadi imfutshane ngethemba lokuba umfundi uya kuba namava am amncinci njengomntu ozimeleyo kunye nendlela mna njengomntu ozitolika ngayo le meko.
khonkco: Ebok.no (Cofa apha ukuze ufunde ngakumbi malunga nencwadi)
(Le yi-ebook, ke kungafuneka wenze umsebenzisi ukuba ayikhuphele)
Inkcazo ethembekileyo neluhlaza isongelwe kwisihluzi ekulula ukusifunda
Le yincwadi yam yokuqala, ukuvavanya amanzi kancinci ukuba kukho umdla kwisifundo. Ndisebenza kwincwadi yam yesibini, eya kuthi icaciswe ngakumbi kwaye inde. "Ndizalwe ngobunzima" Enga-odolwa kwangaphambili kwiwebhusayithi yam AlleDisseOrdene.no
Eli ibilinqaku lendwendwe elibhalwe nguYvonne kwaye simnqwenelela okuhle kodwa ngokuthengisa incwadi. Incwadi enika umxholo obaluleke kakhulu. Ngaba ulilungu leqela lethu le-FB Rheumatism kunye neentlungu ezingapheliyo, kwaye unayo ibhlog yakho okanye iwebhusayithi? Mhlawumbi ufuna ukubhala inqaku leendwendwe malunga nomxholo owuthandayo? Ukuba kunjalo, sikucela ngobubele ukuba usithumelele umyalezo kwiphepha le-FB wethu okanye kwi Ijelo lethu le-YouTube. Sinethemba lokuva kuwe! Zive ukhululekile ukuba uphawule apha ngezantsi ukuba ungathanda ukubonisa inkxaso yakho uYvonne nomsebenzi wakhe wokubhala.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 0 0 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2020-01-04 21:58:172020-06-13 18:29:57-Ukuphila ne-Ankylosing Spondylitis
Olu mahluko kwi-gut unokuba yimbangela ye-fibromyalgia I-Fibromyalgia kunye ne-Gluten: Ngaba ukutya okune-gluten-equlethwe kungakunika ukuvuvukala okungakumbi emzimbeni?